Ahoana ny fomba ahazoana tapakila fiaramanidina mora vidy | Vaovao momba ny dia
Maria | | seranam-piaramanidina, tolotra
Tianay rehetra ny mandeha ary raha kely izany dia manatsara hatrany. Ny fahazoana tapakilan-drivotra mora dia tena zava-dehibe rehefa mikasa ny vakansy izahay satria izay tantinay mitahiry dia azo ampiasaina hamandrihana ny trano fandraisam-bahiny, hetsika fialam-boly na fanofana fiara hivezivezy eo amin'ny toerana halehanao.
Raha te hahafantatra ny fomba ahazoana tapakila fiaramanidina mora ianao dia mametraha famakiana satria azo antoka fa hahaliana anao izany. Lazainay aminao ny tetika sasany hitsitsiana ny dianao!
1 Mamandraha mialoha
3 Ampandehano ny fanairana mailaka
4 Misafidiana toeran-kafa
5 Mividy tapakila mandroso sy miverina
6 Fitsipika ora 24
7 Manidina amin'ny vanim-potoana ambany
8 Mampiasà seranam-piaramanidina hafa
9 Mitambatra sidina
10 Aza mampiditra faktiora
Raha te-hahita varotra izahay, dia tsy maintsy niandry hatramin'ny minitra farany hahitana tapakilan-drivotra mora vidy rehefa nanandrana nanala seza foana ireo kaompaniam-pitaterana. Saingy, androany dia misy zotram-piaramanidina lafo vidy na mpandeha an-tsitrapo maniry handany vola bebe kokoa ho an'ny fampiononana amin'ity kilasy ity, noho izany dia niova ny toe-javatra ary vokatr'izany dia vao mainka mialoha ny famandrihana sidina, dia tsara kokoa.
Ho an'ny sidina lavitra: Araka ny motera fikarohana marobe, mba hahazoana 10% ka hatramin'ny 22% ny sidina dia tsy maintsy mamandrika azy ireo sahabo ho 21-28 herinandro mialoha. Betsaka na kely, antsasaky ny taona.
Ho an'ny sidina lavitra: Raha ny motera fikarohana toy ny Expedia dia tokony ho 2 volana ny idealy ary ho an'i Skyscanner, 7 herinandro mialoha dia azo atao ny manangona 10%.
Raha tsy manana daty voafaritra hanidinana ianao ary afaka manararaotra ny tsy fitoviana dia ity no tena scenario tsara indrindra hotehirizina. Amin'ny fisafidianana daty marefo, andro vitsivitsy etsy ambony na ambany ny daty voafantina na misafidy volana iray hafa aza dia azonao atao ny mamonjy kely ny volanao.
Midira ao amin'ny taratasim-baovao an'habakabaka maromaro mba hampandre anao amin'ny alàlan'ny mailaka ny tolotra androany, zotra vaovao misy zotram-panolorana manokana sy vidiny mora amin'ny sidina minitra farany hahazoana tapakilan'ny rivotra mora vidy.
Toerana itodiana toa an'i Berlin, Roma, Paris na New York no mazàna tadiavin'ny mpandeha sy ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka matetika, ka izany no mahatonga ny fiakaran'ny vidin'ny tapakilan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka. Na izany aza, misy toeran-kafa tsy dia fantatra loatra izay mahaliana ihany nefa mora kokoa ny manidina any amin'izy ireo.
Miaraka amin'ny vola vidin'ny tapakilan'ny fiaramanidina mankany amin'ny tanàna eropeana na amerikanina malaza iray dia azonao atao ny manao dia hafa mankany amin'ny toerana kely fangatahana. Araka izany dia azo atao ny mandeha indroa raha kely ny vola.
Mividy tapakila mandroso sy miverina
Indraindray mety ho mora vidy kokoa ny mividy sidina mandroso mankany amin'ny orinasa isan-karazany noho ny amin'ny seranam-piaramanidina iray ihany. Ohatra, afaka manidina avy any Barcelona mankany London ianao miaraka amin'i Ryanair ary miverina miaraka amin'i Easyjet. Miaraka amin'ity rafitra ity dia mitahiry vola ianao ary manana fahafaha-manao bebe kokoa aza, satria afaka miverina ianao isaky ny tianao ary manao izany na dia avy amin'ny seranam-piaramanidina hafa aza.
Fitsipika ora 24
Safidy iray hafa ahazoana tapakila fiaramanidina mora vidy dia ny fampiharana ny fitsipika 24 ora. Inona no ahitana azy? Mora be. Manome fiverenana maimaimpoana anao ny seranam-piaramanidina sasany raha manafoana ny tapakila alohan'ny 24 ora ianao. Ampiasao araka izany ny fampandrenesana ny vidiny mba hampitahana ny vidin'ny famandrihanao sy ny vidin'ny sidina izay latsaka be. Amin'ity fomba ity dia azonao atao ny manafoana ny famandrihanao voalohany hananganana iray vaovao.
Ity fomba ity dia ahafahanao mitahiry vola nefa tokony ho tadidinao fa misy kaompaniam-pitaterana an'habakabaka sasany tsy manome an'io safidy io ary ny sasany aza mety handoa sarany fanafoanana aza raha mihoatra ny fe-potoana 24 ora ianao.
Manidina amin'ny vanim-potoana ambany
Raha azonao atao ny mandeha amin'ny vanim-potoana ambany, aza hadino izany satria mora kokoa ny tapakilan'ny fiaramanidina. Toy izany koa no mitranga amin'ny andro amin'ny herinandro satria mora kokoa ny mandeha mandritra ny herinandro noho ny amin'ny faran'ny herinandro.
Mampiasà seranam-piaramanidina hafa
Ny manidina amin'ny seranam-piaramanidina faharoa dia mora vidy kokoa noho ny manidina amin'ny seranam-piaramanidina lehibe, fa alohan'ny manapa-kevitra dia tsara ny manao kajy momba ny vidin'ny fitaterana an-tanety mankany amin'ny hotely anao. Ny tsara indrindra dia ny mahita fifandanjana amin'ny teti-bolantsika.
Na dia tsy ny drafitra tsara indrindra aza ny fandaniam-potoana mandritra ny ora tsy miasa any amin'ny seranam-piaramanidina mba hifandraisana amin'ny sidina iray hafa rehefa mandeha dia mety ho fomba tsara indrindra itehirizana izany amin'ny fisorohana sidina mivantana. Afaka manararaotra mandehandeha mamaky ny terminal ianao, mitsidika ireo fivarotana seranam-piaramanidina na mamaky boky tsara.
Aza mampiditra faktiora
Mihabetsaka ny zotram-piaramanidina mandoa ny valizy, ka raha te hahazo tapakila fiaramanidina mora vidy ianao dia afaka misafidy harona an-tanana fa tsy miditra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » seranam-piaramanidina » Ahoana ny fomba ahazoana tapakila fiaramanidina mora vidy
Inona no ho hitanao ao Covarrubias